bt-auto bulletek auto led isi ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta bọlbụ - Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd.
Igwe ọkụ ọkụ LED
Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd. (nke a maara dị ka BT-AUTO) dị na Guangzhou, China.Anyị na-arụ ọrụ ọkachamara na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ruo ọtụtụ afọ.Anyị na-enye ngwaahịa na ọrụ ahaziri ahazi (OEM na ODM) maka ndị ahịa.
Ngwaahịa BT-AUTO LED kwụsiri ike yana arụmọrụ dị elu.Anyị na-agbasawanye ngwaahịa ọkụ ọkụ ọkụ akpaaka, iji gboo mkpa ndị ahịa.
BT-AUTO bụ ọrụ nkwụsịtụ, ụdị ngwaahịa anyị dị iche iche nwere ike izute ọtụtụ arịrịọ ndị ahịa.Site na ndị otu ahịa anyị nwere ahụmahụ na ọrụ, anyị na-enwe ike ịghọta nkwenye anyị "Ndị ahịa mbụ, ọrụ mbụ".
BT-AUTO abụrụla ọkachamara n'ahịa ọkụ akpaaka mba ụwa kemgbe ọtụtụ afọ.Anyị na ndị ahịa si n'ọtụtụ mba na mpaghara, dị ka Europe, Russia, North America, South America, Southeast Asia na ihe ndị ọzọ, na-eme ka mmekọrịta azụmahịa na-aga n'ihu na-eme ka anyị na ndị ahịa nweta ezigbo aha.Anyị na-anabata ndị mmekọ pụrụ iche sitere n'akụkụ ụwa niile.
Ogo BT-AUTO Lighting na-adị elu mgbe niile.Anyị na-agba ọsọ Control Quality Control na usoro ọ bụla, dị ka: elu na ala okpomọkụ ule, okpomọkụ na-eguzogide ule, ịka nká ule, waterproof ule, uzuzu uzuzu ule, ozugbo elu / ala voltaji ule, wdg.
Ike BT-AUTO bụ ihe ọhụrụ.Anyị raara onwe anyị nye nyocha na mmepe, anyị na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile.
BT-AUTO, a ga-atụkwasị obi.
Akụkọ ihe mere eme nke ọkụ ọkụ BT-AUTO LED
Ihe ngosi BT-AUTO
Anyị bụ ndị otu na-eto eto na ume, ọkachamara na ahụmahụ nakwa.
Anyị na-enye ọrụ dị elu yana ngwaahịa dị elu maka ndị ahịa anyị.
Ike anyị bụ ihe ọhụrụ.Anyị raara onwe anyị nye R&D, anyị na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile.
Nkwenye anyị bụ "Onye ahịa mbụ, ọrụ mbụ".
Ụlọ ọrụ: Guangzhou Bulbtek Electronics Technology Co., Ltd.
blọgụ kacha ọhụrụ
Njem otu ụbọchị gaa na ọdọ mmiri Jingshan, Qingy...
[ngwaahịa] HID Ballast T5 55W CANBUS Testi...
[PRODUCT] Ntụle nke Halogen, HID, Spe...
[ Ngwaahịa & Ọrụ] BT-AUTO Otu 2 ...
[ALIBABA] Alibaba Super September asọmpi…
Ajụjụ maka ọnụahịa ọnụahịa